स्वास्थ्यमा सरुवा: स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिइन् – जनस्वास्थ्य खबर
काठमाडौं ७ कार्त्तिक । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको छ । सचिव भएसंगै विवादित बनेकि सचिव चौधरीलाई मंगलबार मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो । निर्णय अझै सम्म औपचारिक रुपमा बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सचिव चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी गराएका छन्। सचिव चौधरी विविन्न ठेक्का तथा सरुवाको विवादमा तानिएकी थिइन् । यसै बीच स्वास्थ्य सचिव चौधरीको स्वास्थ्यमन्त्रीसँग समेत सम्बन्ध चिसिएको थियो।
उनको सरुवासँगै निमित्त सचिवको जिम्मेवारी १२ औं तहका सुशीलनाथ प्याकुरेलले पाउने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश १: सामाजिक विकास मन्त्रालयले तह घटाएर स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटायो
Related Topics:Featuredjanaswasthya khabarministry of health and populationswasthya sewa bibhag